Sadex Soomaali ah oo lagu dhaawacay Örebro | Somaliska
Sadex Soomaali ah oo lagu dhaawacay Örebro
Wararka naga soo gaaraya magaalada Örebro ayaa sheegaya in 3 dhalinyaro Soomaali ah lagu dhaawacay xaafada Vivalla, ee magaalada Örebro. Dhacdadaan ayaa la sheegay in ay salka ku hayso dhalinyaradaan oo ka tirsan kooxaha burcada abaabulan. Ambalaaska ayaa sadexda qof u qaaday hospitaalka iyadoo wararka ay sheegayaan in mid ka mid ah uu dhaawaciisa halis yahay.
Haweenay goobjoog u ahayd dhacdada ayaa wargeyska Nerikes Allehandas u sheegtay in ay maqashay dhowr xabadood, ka dibna markii ay daaqada furtay ay aragtay labo nin oo dhulka yaala iyo ragg gaaraya tobaneeyo oo goobta ka dhaqaaqay. Dhacdada ayaa lagu sheegay dagaal u dhexeeya labo kooxood oo iska soo horjeeda.
Wali ma cada in Soomaali keliya ay ku lugleedahay dhacdada iyo in dadkale ay ka qeyb qaateen. Ma ahan markii ugu horeysay ee dhalinyaro Soomaaliyeed lagu dhaawacay Sweden.